हार्नुपर्ने चुनाव महिलाले किन लड्ने ? |
हार्नुपर्ने चुनाव महिलाले किन लड्ने ?
प्रकाशित मिति :2019-12-08 12:05:14
जनकपुर । केही दिन पहिला मात्रै प्रदेश नम्बर दुईसहित नेपालभर उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नम्बर दुईको धनुषा जिल्लाबाहेक अन्य सात जिल्लामा समेत उपनिर्वाचनको लहर देखियो ।
उपनिर्वाचनमा मधेशवादी दलदेखि लिएर एकताका विखण्डकारी मुद्दा लिएर चर्चित बनेका डा. सिके राउतसहित विभिन्न दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा उतारे । उपनिर्वाचनका लागि कुनै दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाए भने कुनैले पुरुषलाई ।
यसैमध्ये महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समेत गाउँपालिकाका दिवंंगत अध्यक्ष विनोद चौधरीकी पत्नी रविता चौधरीलाई अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनायो ।
उक्त स्थानीय तहमा यसअघि पनि राजपातर्फकै अध्यक्ष रहिसकेकाले चौधरी पत्नी रविता उपनिर्वाचन जित्ने भन्नेमा उक्त पार्टी विश्वस्त थियो ।
राजपाले रविता चौधरीको प्रचारप्रसारको लागि शिर्षस्थ नेतादेखि कार्यकर्तासम्म खटायो । रवितालाई मतदान गर्नका लागि राजपाका शिर्ष नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेता स्वयं प्रचारप्रसारमा जुटे ।
तर उपनिर्वाचनको नतिजामा भने रविताले पराजय मात्रै बेहोरिनन्, तेस्रो नम्बरमा आईन् ।
एकातर्फ पार्टी विजयी हुनेमा आश्वस्त रहेका पार्टी नेताहरू रविताले चुनाव हारेपछि निर्वाचनको बेला बनाईएको रणनीति र गरिएको गृहकार्यसम्बन्धमा समिक्षा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ श्रीमान्का अपुरा सपना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रेकी रविताको सपना समेत चकनाचुर भएको छ ।
“पार्टीले चुनावमा उठाएपछि श्रीमान्ले बाँकी राख्नुभएको काम र उहाँले कल्पना गर्नुभएको पिपरा गाउँपालिकाको सुन्दर सपना पूरा गर्छु भन्ने सोचेकी थिए, तर सकिन” रविताले भनिन् ।
“पार्टीले प्रचार प्रसारमा कुनै कसर बाँकी राखेन, हामीले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चभित्रै रहेर खर्च समेत गर्यौँ, जनताको घर–घरमा पुगी आफ्नो मुद्दा र सोच पस्कियौँ । तर खराब परिपाटीका कारण चुनाव उम्मेदवारको आचरण वा सोचले नभई पैंसा र बलले जितिनेरहेछ” उनले अगाडि भनिन्, “जहाँ रातारात मासु र पैसा बाडिन्छ, त्यहाँ महिला उम्मेदवार कहिल्यै जित्न सक्दैनन् ।” उनले चुनाव जित्नकै लागि प्रयोग गरिने घिनलाग्दो रणनीतिप्रति विरक्त हुँदै गणतन्त्रमा पनि मतदाताले आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग नगर्नु, पैंसामा मत बेच्नु भनेको परिवर्तन र विकासलाई धूलोमा मिसाउनुसरह भएको बताइन् ।
पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षका पदका लागि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलो पटक चुनावमा भाग लिए पनि महिलालाई नै गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्‍यो र उक्त पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनिन्, अन्जनी देवी मण्डल ।
तर अलग मधेशको मुद्दालाई लिएर प्रख्यात कार्यकर्ता बनाई सकेका डाक्टर राउतको क्रेजसमेत पिपरा गाउँपालिकाको उपचुनावमा चल्न सकेन ।
डा. राउत उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि पिपरा पुग्दा उनको भाषण सुन्न आमजनता ओर्ले पनि उपनिर्वाचमा भने उनको पार्टी जनमत ल्याउन सफल भएन । राउतको पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेकी अन्जनीले ६ सय १६ मत ल्याएर सिमित हुन पुगिन् । पिपरामा मतदाता संख्या १८ हजार ५ सय ८८ रहेको छ ।
“प्रचारप्रसारमा जाँदा सबैले सकारात्मक रुपमा लिए । भोट दिन्छौं भने । तर पुरुष छँदाछँदै नेतृत्व तहमा महिला आउनु भनेको लज्जास्पद हुने भन्ने मानसिकता अहिले पनि कायमै रहेको छ । जुन कुरा गाउँपालिकाको उपनिर्वाचनले समेत पुष्टि गरेको छ” अञ्जनीले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि खर्च निर्धारण गरे पनि अनुगमन नभएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही उम्मेदवारले पैंसामा भोट किन्ने गरेको अन्जनीको आरोप छ । आफ्नो पार्टी पहिलो पटक चुनावमा सहभागी भएकाले विगतमा चुनाव लडेको गतिलो अनुभव नहुँदा पनि मतदातालाई प्रभावमा पार्न नसकेको हो की ! भन्ने बुझाइ उनको छ । यद्यपि असल, इमान्दार र योग्य व्यक्ति नै मतदाताको रोजाइमा पर्छन् भन्ने आफ्नो बुझाइ गलत साबित भएको उनले बताइन् । भनिन्, “बहुमत पो ल्याउन सकिन । तर मैले पाएको ६ सय १६ मत अमूल्य मत हो । यसको कदर गर्नेछु ।”
मोटो रकम खर्चेर जित्ने उम्मेदवारले दुःखसमेत त्यतिकै दिने अन्जनीले अनुभव सुनाइन् । उनी भन्छिन्, “जुन दल वा उम्मेदवारले रकम खर्चेको छ, उ वा उसको पार्टीले ती सबै रकम पदमा गएपछि असुल्दैनन् भन्नेमा कसरी विश्वास गर्नु ?” तर मतदाताले यो कुरा बुझ्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।
यी दुई महिला उम्मेदवार प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । प्रदेश दुई मात्रै नभई देशभरीकै प्रायः महिला उम्मेदवारहरूले गुनासो गर्ने मुद्दा भनेकै यही हो ।
कांग्रेस धनुषाकी नेता सम्झना वर्मा सुनाउँछिन् “वर्षौ वर्षसम्म काम गर्ने बेलामा हामी महिला सक्षम हुन्छौँ । तर निर्वाचनको समयमा हाम्रो समक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने गर्दछ । महिलालाई नेतृत्व तहमा लडाए हाम्रो पार्टीले हार ब्यहोर्छ की भनेर उम्मेदवार बनाइँदैन । यति मात्रै होईन, पार्टीले वा नेतृत्वले महिलालाई उठाए पनि नाम मात्रैको प्रचार प्रसार गरिन्छ, जुनकी पुरुष उम्मेदवारहरूको तुलनामा निकै नै कम हो ।”
कुनै पनि पार्टीले महिलालाई ‘डमी’ उम्मेदवारको रुपमा चुनाव लडाउन नहुने नेतृ वर्माको कथन छ । वर्मा भन्छिन्, “यदी पैंसाको चलखेल नभई चुनाव लड्ने हो भने महिलाको कार्य कुशलता र लगनशीलताले महिला सधैं नेतृत्व तहको भूमिकाका लागि अग्रपंक्तिमा रहनेछन् ।”
यता राजपाकी नेता बिभा ठाकुर मंसिर १४ गते सम्पन्न भएको चुनावको नतिजाले अहिले पनि पैसा र बल भएकैले चुनाव जित्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछिन् । होईन भने चुनावको अघिल्लो दिनसम्म जित सुनिश्चित भईसकेको अवस्थामा रातारात यति ठूलो परिवर्तन कहिल्यै सम्भव नहुने उनले बताइन् ।
राजपा नेतृ ठाकुर अगाडि भन्छिन् “हामी महिला उम्मेदवारहरूले पूर्ण रुपले ईमान्दारिता देखायौँ । तर ईमान्दारिता पैंसा र बलको अगाडि टिक्न सकेन । जीतिसकेको हाम्रो उम्मेदवारले एकै चोटी तेस्रो स्थानमा झर्नुपर्‍यो । पैंसाले मतदाता प्रभावित गर्ने फोहोरी खेल सदाका लागि बन्द हुन नसकेमा इमान्दार र बिपन्न उम्मेदवारले कहिल्यैं चुनाव नलडे हुन्छ । यो कुरा धेरै पटकको निर्वाचनले देखाइसक्यो ।”
गत मंसिर १४ गते सम्पन्न भएको उपचुनावमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि कुल २० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा दुई पार्टीबाट दुई जना महिलामात्रै अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार थिए ।
महिलालाई प्रमुख पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिन लगाए पनि महिलामाथि गरिने लगानी र विश्वासमा अहिले पनि कमी नै रहेको महिला नेताहरूको आरोप छ ।
दुई नम्बर प्रदेश त्यसै पनि महिला पछाडि पारिएको ठाउँ । घुम्टोबाटै आफ्नो अस्तीत्वका लागि लड्न खोज्ने महिलालाई अनेक जञ्जिर फिँजाइन्छन् । त्यसका बाबजुद पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका महिलाहरूलाई यो वा त्यो बहानामा हराइन्छ, हतोत्साहित बनाइन्छ ।
महिलाले चुनाव जिते उनलाई कसरी नेता मान्नु, कसरी नमस्कार गर्नु भन्ने मानसिकताले पार्टीभित्रका पुरुषले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन हिच्किचाउने र बनाइहाले पनि जिताउनका लागि खासै पहल नगर्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा पराजय भोगेकी अञ्जनीले अनुभव सुनाइन् ।
“ईमान्दार भएकै कारण महिलाले कहिलेसम्म चुनाव हार्ने ? पैंसा हुनेले मात्रै चुनाव जित्ने हो भने धनाड्य बीच प्रतिस्पर्धा गराए भैहाल्छ । किन राजनीतिक पार्टी चाहिए, किन उम्मेदवार बनाउनुपर्‍यो र ?”
महिलाले कुनै पनि चुनाव जिते उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पुरुष नेतृत्वभन्दा निष्ठावान् हुन्छन् । उक्त पद नै भ्रष्टाचार मुक्त समेत रहने दाबी महिला नेताहरूको छ । तर पनि पितृसतात्मक सोचले जहिले पनि महिलालाई अगाडि बढेको, नेतृत्व गरेको देख्न नसहने परिपाटीको सिकार महिला नेता तथा उम्मेदवारहरू हुँदै आएका छन् । यसैको परिणाम स्वरुप महिला नेताहरूले निर्वाचनमा टिकट पाउँदैनन् । पाइहाले पनि पार्टीको कमजोर संगठन भएको निर्वाचन क्षेत्रको पाउने र अन्तमा जसरी पनि हराइने राजपाकी नेता बिभा ठाकुरको बुझाइ छ ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, कम भड्किलो बनाउन, योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई जिताउनका लागि मतदाताहरूले कसैको लोभ, लालच, दबाब र प्रभावमा पर्न नहुने ठाकुर बताउछिन् । यसो हुन सकेमात्र महिलालाई चुनाव लड्न र जित्न सहज हुने उनको राय छ ।
कांग्रेस धनुषाकी नेता सम्झना वर्मा प्रश्न गर्छिन्, “ईमान्दार भएकै कारण महिलाले कहिलेसम्म चुनाव हार्ने ? पैंसा हुनेले मात्रै चुनाव जित्ने हो भने धनाड्य बीच प्रतिस्पर्धा गराए भैहाल्छ । किन राजनीतिक पार्टी चाहिए, किन उम्मेदवार बनाउनुपर्‍यो र ?” निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने र पार्टीहरूले निर्वाचन आचारसंहित अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने सुझाव वर्माको छ । उनी थप्छिन्, “यदि त्यसो हुन्न भने पैसा नभएकै कारण र इमान्दार भएकै कारण हार्नुपर्ने चुनाव महिलाले किन लड्ने ?”
(पत्रकार झा जनकपुरबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)